ubonakalisa isibuko kwi-gen-ipad yokuqala? nazi iiapos; njani
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Bonisa isibuko kwi-gen-gen yokuqala ye-iPad? Nantsi iapos; s njani
Bonisa isibuko kwi-gen-gen yokuqala ye-iPad? Nantsi iapos; s njani
U-Apple wazisa i-gen-gen yesibini kunye nesihlanganisi se-HDMI esikuvumela ukuba ubuke ngokulula oko ukubonayo kwithebhile yeTV ye-HD, kodwa ngaba oku kunokwenzeka kwi-iPad yoqobo? Ukujika, ayisiyiyo i-iPad kuphela, kodwa i-iPhone 4 kunye ne-4th-gen iPodtouch exhasa ukubonwa kwesixokelelwano ngokubanzi kwaye ithatha kuphela i-iDevice yasejele kunye nokuba yiapile kunye neeapos zeDijithali yeAVA okanye iVapter yeVGA.
Isinyathelo sokuqala kwindlela yakho yokubukisa umxholo kukuhlaziya okwangoku IOS 4.3.1 . Wena & apos; uyakufuna ukophula isixhobo sakho ejele, kodwa ukuba ukuvalelwa kwejele kukoyikisa kuwe, ungathandabuzi ukutyelela inyathelo lethu ngenyathelo lokuyalela apha, ekufuneka liphendule yonke imibuzo yakho.
Okwesibini, kuya kufuneka uguqule useto kwi-Springboard app, enoxanduva lokulawula isikrini sakho sasekhaya. Sebenzisa i-SSH, yiya ku:
Inkqubo / ilayibrari / ii-coreservices / i-springboard.app /
Inyathelo lakho elilandelayo kukukhuphela i-K48AP.plist (ye-iPad), i-K90AP.plist (ye-iPhone 4), i-N81AP.plist (ye-iPod touch) kwifayile esuka kuloo ndawo iye kwikhompyuter yakho kwaye uyivule ukuze ihlelwe ngenkqubo efana neXcode. IMac kuphela kwento eseleyo kukutshintsha umgca omnye ukuze uhambelane nomfanekiso Gcina ifayile, uyilayishe kwi-iDevice yakho, uqalise ukusebenza kwakhona kunye ne-voila!
Okokugqibela, ilizwi lesilumkiso livela kubasebenzisi abaye baxela ukuba ubusela abuzukusebenza neApple & apos; s Intambo okanye iiNtambo zeCandelo. Ngaphandle kwalonto, ukwenza isipili kubonakala kusebenza ngokungagungqiyo. Jonga le vidiyo ingezantsi ukuze ubone umxholo okwi-gen-gen yokuqala ye-iPad eboniswe ngqo kwi-HD TV. Ngezicelo ezimbalwa ezilungiselelwe amandla asisiseko se-iPad entsha, usenokufumana esinye sezizathu zokuncamathela kwithebhulethi yakho elungileyo, indawo yokuhlala kunye nawe?
umthombo: Indalo kunye neeapos; iiStudios zamehlo
intombi eyintombi isicwangciso se-walmart esingama-20
Inqaku lomnyeleji 5 vs s7
I-Fitbit Sense kunye noVersa 3 uhlaziyo longeza amanqanaba e-SpO2, iimpendulo zikaGoogle ezivakalayo
Uvavanyo lweSamsung yeGear 2
I-Sony Xperia X icwecwe v Xperia Z5 Icwecwe vs Xperia Z3 Icwecwe: ukuthelekiswa kwe-specs